Akatungamira mwenje Fekitori | China LED mwenje Vagadziri, Vatengesi
Chiedza chakajeka chinobuda chakanyatso gadzika, chiine yakawedzera luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwira, pasina mercury, isina infrared, hapana ULTRAVIOLET, hapana magetsi emagetsi anopindirana, hapana kupisa kwemhepo, hapana radiation, hapana stroboscopic phenomenon. Light uremu uye nyore kuisa. Inokodzera kumahotera, makamuri emisangano, mafekitori kana mahofisi, KUSHANDISWA KUSHANDISWA, pekugara kana zvivakwa zveveruzhinji, zvikoro nezvipatara uko kunochengetedza simba uye neruvara rwakakwirira kupa mwenje mwenje kunodiwa.
18W 40W 80W yakadzora LED SMD mwenje wakachena weiyo nzvimbo yakachena
Iyo furemu dhizaini yemukati yakachena yemwenje mwenje ndeye Ultra-yakatetepa uye padyo nedenga. Muviri wemwenje uye chivharo chekumashure chakazadzwa nekukwirira-kuwanda chisimbiso. Hapana guruva, nyore kuchenesa, hapana kupenya. Iyo yazvino semiconductor diode yakatungamira mwenje tekinoroji inovandudza zvakanyanya hupenyu hwechiedza sosi, uye haina mercury mune echinyakare fluorescent marambi, ayo anonyanya kugarisana nharaunda. Chipatara, chemishonga, kugadzira chikafu, kuchengetedza uye maindasitiri akachena mukamuri mwenje sarudzo yakanaka. Mhando dzakasiyana dzehukuru hwemuviri saizi uye mhando sosi sosi mhando zvinosarudzika Inoshandiswa yezana 100-10000 nhanho yehutsanana nguva.
Mvura-chiratidzo 9W 18W 25W LED chip mhando tri-chiratidzo mwenje
Chiedza chinosangana neIP65 chiyero. Isina mvura, hunyoro-chiratidzo, guruva-chiratidzo chisimbiso dhizaini, inonzwisisika chimiro, yakanaka uye nerupo, kukiya dhizaini yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika, nyore kuisa nekuchengetedza. Imwe chete mwenje mwenje mubati, 250V mhando yepamusoro murazvo unodzora mainjiniya mapurasitiki, yakakwira michini simba, dhayamita uye kukwirira ichifambisa rotary mhando, yakanaka yekuita mashandiro. Novel dhizaini, compact dhizaini, runako chitarisiko, nyore kuisa nekuchengetedza, kukurumidza kutanga-up. Iyo inokodzera nzvimbo dzekunze nedzokunze dzisina mvura, guruva-chiratidzo uye unyoro-chiratidzo chinodiwa.
70W 100W 150W yakakura voltage LED purojekiti-mwenje mwenje
Mumvuri wechiedza unogadzirwa neakakwira aruminiyamu kufa kukanda, kwakanyanya kupisa kupisa kudzora mwenje sosi inogadzirwa neye-yakakwira-yakakwira kupenya mwenje mabheji, kupenya kwakanyanya, uye kugadzikana kushandiswa; Nguva dzose magetsi aripo anovakwa mukati kuti ave nechokwadi chekuita kwakatsiga kwemarambi. Inokodzera indoor yepamusoro-yakasimba mwenje, senge semusangano, nzvimbo dzeruzhinji uye imwe yakareba nzvimbo yekuvhenekesa.
180V ~ 220VAC aluminium alloy inotonhora yakatungidza LED pasi mwenje
Muviri wakareruka unogadzirwa nealuminium alloy chaiyo kufa-kukanda, yakasarudzika-yakatetepa chimiro, pasi mwenje kuburitsa maitiro, pamusoro poda yakakwira tembiricha inorapa kurapwa, ngura kuramba. Iyo rambi yekushandisa system inopa LEDSMB2835 zvinoenderana neAmerican Energy Star standard, ine diki kuora kwechiedza uye yakakwirira mwenje kugona. Mitsubishi optical diffusion ndiro, yakapfava mwenje, yakakwirira mwenje kuburitsa kugona. Kutsigira yakakwira simba chinhu chakaparadzaniswa chenguva dzose-chazvino dhiraivha magetsi, yakakwira standard dhizaini dhizaini, yakaoma zvinhu kusarudzwa, kuomesa kuyedza, kuona mwenje inoshanda yakatsiga uye hwakareba hupenyu. Inoshanda nzvimbo: Museum art centre, imba yekutenga, hotera yepamusoro, yepamusoro-kumagumo zvitoro uye zvimwe zvemukati kiyi mwenje.
aluminium gusset ndiro yakaturikwa siringi LED yakachena mapaneru mwenje
Chiedza chakajeka chinobuda chakanyatso gadzika, chiine yakawedzera luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwira, pasina mercury, isina infrared, hapana ULTRAVIOLET, hapana magetsi emagetsi anopindirana, hapana kupisa kwemhepo, hapana radiation, hapana stroboscopic phenomenon. Light uremu uye nyore kuisa. Inokodzera kumahotera, makamuri emisangano, mafekitori kana mahofisi, zvinoshandiswa mukutengesa, pekugara kana zvivakwa zveveruzhinji, zvikoro nezvipatara uko kunochengetedza simba uye neruvara rwakakwirira kupa mwenje index.
Kirasi 1 simba rekuchengetedza bevel kumucheto LED yakachena mapaneru mwenje
Chiedza chakajeka chinobuda chakanyatso gadzika, chiine yakawedzera luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwirira, pasina mercury, isina infrared, hapana ultraviolet, hapana magetsi ekuvhiringidza, hapana kupisa kwemhepo, hapana radiation, hapana stroboscopic phenomenon. Light uremu uye nyore kuisa. Inokodzera kumahotera, makamuri emisangano, mafekitori kana mahofisi, zvinoshandiswa mukutengesa, pekugara kana zvivakwa zveveruzhinji, zvikoro nezvipatara uko kunochengetedza simba uye neruvara rwakakwirira kupa mwenje index.
Kirasi 1 simba rekuchengetedza simbi isina simbi kumucheto LED yakachena mwenje
Chiedza chakajeka chinobuda chakanyatso gadzika, chiine yakawedzera luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwirira, pasina mercury, isina infrared, hapana ultraviolet, hapana magetsi ekuvhiringidza, hapana kupisa kwemhepo, hapana radiation, hapana stroboscopic phenomenon. Light uremu uye nyore kuisa. Inokodzera kumahotera, makamuri emisangano, mafekitori kana mahofisi, KUSHANDISWA KUSHANDISWA, pekugara kana zvivakwa zveveruzhinji, zvikoro nezvipatara uko kunochengetedza simba uye neruvara rwakakwirira kupa mwenje mwenje kunodiwa.
Kirasi 1 simba rekuchengetedza rakatwasuka pamucheto mhando LED yakachena pani mwenje
Chiedza chakajeka chinobuda chakanyatso gadzika, chiine yakawedzera luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwira, pasina mercury, isina infrared, hapana ULTRAVIOLET, hapana magetsi emagetsi anopindirana, hapana kupisa kwemhepo, hapana radiation, hapana stroboscopic phenomenon. Kurema kwechiedza, nyore kuisa, kwakakodzera kumahotera, makamuri emusangano, mafekitori kana mahofisi, kushandiswa kwekutengesa, pekugara kana zvivakwa zveveruzhinji, zvikoro, zvipatara zvinoda kuchengetedza simba uye mwenje wepamusoro weruvara.
Kirasi 1 yakaderera ruzha ngura-chiratidzo LED grille mwenje
Inobatanidza yakanakisa kugoverwa kwechiedza, kushomeka kwesimba kwesimba uye kudzora mwenje mumwenje mumwe chete kuti uwane huwandu hwepamusoro hwemwenje yemahofisi zvinodiwa. Inogona kuenzaniswa nekaviri, matatu, mana mabhuu sarudzo, inokodzera zvidikanwi zvakasiyana zveyakareruka mwenje kugovera, mwenje wekuburitsa mwero unodarika 70% diki vhoriyamu, inobatsira kutakura, kuchengetedza, kuisa. Tsamba "V" inomiririra yakamisikidzwa, uye "X" inomiririra denga. Inokodzera zvivakwa zvemahofisi, mahofisi, nzvimbo huru dzezvitoro, makamuri ekumirira, mafekitori, zvikoro, zvipatara nedzimwe nzvimbo dzemukati dzeveruzhinji.
Simba kuchengetedza 150W 250W 400W mwenje wemigodhi we LED
Inokodzera zvirimwa zvemabhizimusi, zvitoro, zvitoro, imba yekumirira, imba yekumirira, nzvimbo yekuratidzira, jimunasiyamu nezvimwe magetsi.
LED yekubatanidza braket mwenje yehofisi, yekugara, yekudyara kushandiswa
Dhizaini dhizaini, kutaridzika kwakanaka, diki vhoriyamu. Inokodzera hofisi, imba, mwenje wekutengesa, nezvimwe.